Ihe omuma maka nghazi na Yoga - WRSP
Ntuziaka maka Nhazi na Yoga
Sahapedia Haṭha Yoga Ihe Ọmụma Ihe Ọmụma:
Sahapedia bụ ihe eji emeghe n'ịntanetị na nka, ọdịbendị na ihe nketa nke India. Usoro isiokwu iri a gụnyere nkọwa nke akụkọ ihe mere eme nke yoga, yana isiokwu nke ndị ọkachamara isiokwu metụtara ha onha yoga, yoga nke oge a, ntụgharị uche, Pātañjala yoga, prāṇāyāma, ahụ dị aghụghọ, mantra, na Āyurveda.
Nkwupụta Okpukpe na Yoga:
Okpukpe Dispatches bụ otu nọọrọ onwe ya, nke na-enweghị uru, nke na-emeri ihe nrite maka ederede kachasị mma banyere nsogbu dị oke mkpa na oge na-aga n'okporo ụzọ okpukpe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọdịbendị. Ọ na-egosipụta ntụgharị uche oge site n'aka ndị ọkà mmụta banyere arụmụka ndị ọzọ dịkọrọ ndụ na esemokwu metụtara ndị otu yoga.
Pọdkastị na Ihe Egwu: Ihe omumu nke okpukpe banyere Yoga
Okpukpe Studies Project (RSP) bụ ụlọ ọrụ na-emekọrịta ihe ọnụ na -emepụta pọdkastị kwa izu yana ndị isi mmụta na ọmụmụ sayensị-nke okpukpe.
Akụkọ banyere nkà ihe ọmụma n’enweghị ọdịiche ọ bụla. "yoga. Ajụjụ ọnụ a gbara Philipp Maas na Pātañjalai Yogaśāstra. 26 Nọvemba 2016.
Ihe omumu nke okpukpe. ''Ihe ndị mere eme na akụkọ ihe mere eme, ndị ama ama na Yoga. Ajụjụ ọnụ David Gordon White. 22 June 2016.
BBC Radio 4 / Omenala Amamihe. ''Akụkọ nzuzo nke Yoga. Na Jim Mallinson, Suzanne Newcombe na Mark Singleton. 17 June 2016.
Okpukpe okpukpe. ''Otu yoga si si India gbaga na mgbatị gị. Na-egosi Andrew Nicholson. 11 Machị 2016.
BBC Radio 4. 'Yoga' na Nkwenye Na-abụghị. Jim Mallinson na Suzanne Newcombe na-egosi. 10 nke February 2014.
Newcombe, S. (2017) 'Revival nke Yoga na Contemporary India' Na: Barton, John ed. Oxford Research Encyclopedias: Okpukpe. Oxford: Mahadum Oxford University. DOI: 10.1093 / acrefore / 9780199340378.013.253.
Baier, K. (2012) 'Nnyocha Yoga nke Oge A: Nghọta na Ajụjụ'.
Onye oru ugbo, J. (2012) 'Amerịka'(na nlebara anya na Mark Singleton's Ahụ Yoga: Origkpụrụ Omume Oge A, Stefanie Syman si Subzọ Na-apụtaghị Ihe: Akụkọ nke Yoga na America, na nke Robert Love's Nnukwu Oom: Ọmụmụ Ọmụmụ Yoga na-agbanwe agbanwe na America) na Nyocha na American History40: 145–158 ..
Bronkhorst, J, Chapple, CK, Patton, LL, Samuel, G., Sarbacker, SR na Wallace, V. (2011) 'Contextualizing Akụkọ nke Yoga na Geoffrey Samuel's Mmalite nke Yoga na Tantra: A Ntughari Ntughari' Akwụkwọ nke International Journal of Hindu Studies15 (3): 303-357.
Newcombe, S. (2009) 'Mmepe nke Yoga Oge A: Nyocha nke Ubi' Ogbago okpukpe 3 (6): 986-1002. A tupu akwukwo dị maka ntụnye dị ka pdf.
Bara Uru Ọmụmụ nrụọrụ:
American Academy of Religion Yoga na Theory na Omume Otu
Na-achọ ịkọwapụta ihe nnọchianya okpukpe na nke okpukpe nke yoga na akụkọ ntolite South Asia na ọdịbendị yoga nke oge a nke pụtara na narị afọ gara aga.
Haṭha Yoga Project (HPY)
Hatha Yoga Project bụ oru nyocha nke afọ ise nke European Research Council kwụrụ ụgwọ ma dabere na SOAS, Mahadum London, nke na-ezube ịkọ akụkọ ihe mere eme nke yoga site na philology, ya bụ ịmụ ederede banyere yoga, na ihe omuma, dika oru nke ndi yoga. Ndị otu ọrụ a nwere ndị nyocha anọ dabere na SOAS, otu na École française d'Etrème Orient, Pondycherry, na otu na Maharaja Man Singh Pustak Prakash, Jodhpur.
Nnyocha weebụsaịtị Yoga nke Oge a
Ebumnuche weebụsaịtị a iji nyere gị aka ịmatakwu banyere nchọpụta guzobere na nke ugbu a na yoga nke oge a na, n'ozuzu ya, banyere ụfọdụ nyocha kachasị na-enye nkọwa gbasara ụdị yoga mbụ. Ndị a bụ mpaghara dị iche iche mana na-ekpuchi ekpuchi, anyị kwenyere na ọ bụ mgbe ha gbakọtara ka nghọta miri emi karị banyere yoga nke oge a nwere ike ime.
Banye n'akụkọ ihe mere eme nke Yoga, Ayurveda na Alchemy na South Asia (AYURYOG)
Ihe oru ngo a nke afọ ise nke ERC na-enyocha akụkọ banyere yoga, ayurveda na rasaśāstra (Indian alchemy na iatrochemistry) site na narị afọ nke iri ruo ugbu a, na-elekwasị anya na ahụike ọzụzụ, mmegharị na omume ogologo ndụ.
Yoga Scapes: Economics of imagination and Utopian Aspirations nke Transglobal Yoga na Japan
Ihe omumu ihe omumu nke postdoctoral nke bido na November 2017 na Mahadum Kyoto. N'ịgbalị ịgbanwe echiche nke ọmụmụ yoga zuru ụwa ọnụ site na ọdịda anyanwụ, ọrụ a na-akụzi banyere mmụta mmụọ na-achọ inweta ihe ùgwù ndụ nke ndị na-eme yoga na Japan.